Douglas A_20 Havoc 2 afọ 8 ọnwa gara aga #809
Ebudatara m Douglas A_20 Havoc mgbe mpụsịrị atụmatụ nchekwa kọmputa m niile (Norton na Njikwa Akaụntụ Onye Ọrụ). Nbudata na nwụnye ebe ihe ịga nke ọma. Mgbe ebido FSX Enweghị m ike ịchọta Ohere mpio na windo nhọrọ ụgbọ elu. Ana m eji FSX Booster 2013-Version 2.9 ka ịmalite FSX m nwara ịmalite FSX na-enweghị iji Booster 2013. Agbalịrị m ịmalitegharịa. Mgbe ahụ, m nwara ibugharị FSX Flight Simulator Deluxe Edition si DVD Disk site na iji njikwa mmezi. Enwere m FSX arụnyere na D: data disk abụghị C: diski ime obodo na Mmemme Mmemme (x86) / Egwuregwu Microsoft. Agbalịrị m itinye reinstall ugboro ugboro na iji nwụnye akpaaka yana ihe nrụnye nke ndị ahịa. Onweghi ihe m mere dị ka ochoro iwelite Douglas A_20 mbibi na Ikuku lectiongbọ ụgbọelu.
Ana m agba ọsọ
Nhazi: Intel (R) Core (TM) i7 4790K CPU @4.00 GHz
Nchekwa arụnyere (RAM): 16.0 GB (15.9)
Ụdị usoro: 64 -bit System System, Nhazi X64
Ihe ntanetị: NVIDIA GeForce GTX 970 na Intel (R) Graphics 4600
Ndị na-esonụ ọrụ (s) kwuru Ekele dịrị Gị: papy68